Wasiirkii hore ee amniga Puntland C/llahi Saciid oo ugu baaqay xukuumadda in ay doorashada madaxwaynaha ee soo socota hirgaliso bilawga sanadka 2013. – Radio Daljir
Bosaso,Mar 5 -Wasiirkii hore ee amniga Puntland Gen.Cabdilaahi Saciid Samatar oo maanata soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuu ka qayb geli doono doorashada madaxwaynaha Puntland ee soo socoto.
Gen.Cabdilaahi Saciid Samatar oo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la xiriirta ka qaybgalka doorashada madawaynaha Puntland ka waday dalalka Imaaraatka Carabta iyo Yurub ayaa waxaa uu ugu baaqay dowladda iyo baarlamaanka Puntland inay doorashada madaxwaynaha ay higliyaan,sideeda bisha June ee sanadka inagu soo fool leh ee 2013.
Musharaxa,ayaa sheegay xukuumadda madaxwayne Cabdiraxmaan Faroolle iyo baarlamaanku inay doonayaan inay muddo sanad ku kororsadaan waqtiga loo dhaariyay inay xukunka sii hayaan.
Waxaa uu sheegay talaalabadaasi inay keeni karto dhibaatooyin uu tilmaamay inay horay uga dhacday Puntland islamarkaana aan loo baahnayn xiligaan inay soo laabato.
Musharaxa ayaa ugu dambeyntii shacabka reer Puntland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan midnimadooda iyo sidii dowladda ay ugala shaqeyn lahaayeen amaanka dalka.
Gen.Cabdilaahi Saciid Samatar ayaa noqonya siyaasigii ugu horeeyay ee shaaciyay inuu ka qaybgalayo doorashada madaxwaynaha Puntland ee soo gaara magaalada Boosaaso.
Dhinaca kale ciidamada dowladda Puntland ayaa intii uu garoonka kasoo degin wasiirkii hore ee amniga u diiday saxaafadda inay gudaha u galaan garoonka diyaaradaha,waxaana wariyeyaashii goobtaa tagay ay sheegeen ciidamadu inay kula dhaqaaqeen tacadiyo ay ka mid tahay jir dil iyo burburinta qalabkii ay wateen.